Pixelz: Adeegga Dalbashada Sawirka ee Baahida E-Ganacsiga | Martech Zone
Pixelz: Adeegga Dalbashada Sawirka ee Baahida E-Ganacsiga
Jimco, Nofeembar 17, 2017 Douglas Karr
Haddii aad waligaa horumarisay ama aad maamushay goob e-commerce ah, hal dhinac oo muhiim ah laakiin waqti qaadasho waa awoodda aad u leedahay inaad la socoto sawirrada alaabada ee bogaadinaya goobta. Saddex ganacsade deenish ah oo ku daalay la soo darista dhibaato la mid ah tii hore ee wax soosaarka Pixelz, madal adeeg oo wax ka beddel, dib u hagaaji, oo ku habboonow sawirrada wax soo saarka adiga, adoo u sii deynaya hal-abuurkaaga si aad u abuurto.
Ganacsiga elektaroonigga ah wuxuu ku dhisan yahay sawirka — balaayiin sawirro badeecado ah ayaa la riixayaa, la xoqayaa, oo la isbarbar dhigayaa macaamiisha maalin kasta. Si loogu guuleysto macaamiishaas, noocyada iyo dukaamada waa inay soo saaraan sawirro tayo sare leh, si dhakhso leh, iyo mug aad uga weyn sidii hore. Taasi waa halka adeegga dib-u-hagaajinta ee Pixelz ay ka timaaddo: khadkayaga isku-xidhka takhasuska leh ee Caawinta Shaqada (SAW ™) ayaa isku duba-ridaya tifaftirka sawir-ka ah Software-as-a-service
Waxaad awood u leedahay inaad si buuxda u habeyso wax soo saarka la filayo ee sawiradaada si aad u hubiso inay u dhisan yihiin baahidaada ganacsi e-commerce.
Pixelz sidoo kale qaar ayuu soo saaray waraaqo wargelin ah ku saabsan dhaqamada ugu wanaagsan ee soo bandhigida alaabada e-commerce. Mashruucoodu wuxuu bixiyaa afar baakado qiimo kala duwan:
Solo - Waxay siisaa sawir qaadayaasha kali awood u leh inay ka saaraan asalka, dalagga, isku toosiyaan, ku darto hooska, iyo hagaajinta sawirada alaabta. Xirmada waxay imaaneysaa wiht 3 sawiro tijaabo ah oo bilaash ah iyo dib u laabasho 24 saac ah (Isniinta-Sabtida).
Ganacsade Pro - waxay bixisaa xirfadlayaal e-commerce ah oo leh wax walba oo ku jira Solo oo leh qiimo muuqaal hoose, midab u dhigma iyo sidoo kale soo noqoshada subaxa dambe (Mon-Sat), oo leh ikhtiyaar 3 saacadood ah.
Studio Studio - waxay bixisaa wax kasta oo ku jira Solo marka lagu daro dib-u-hagaajinta caadada ah, midab dhigista, dib u soo celinta, socodka shaqada, iyo dusha sare ee istuudiyaha sawirrada xirfadeed. Waxaa ka mid ah heshiis heer adeeg ah, xirfad fuulid, maaraynta xisaabta u heellan iyo isticmaaleyaal badan.
API - Isku dar otomaatigga shaqaalaynta dalabkaaga-saddexaad ee iibiyaasha, suuqyada, iyo barnaamijyada moobiilka ee RESTful ama SOAP API.
Tags: sawir taabashoimagessawir taabashopixelzwax soo saarka postsawirada alaabtasawirada wax soo saarka
Enterprise IoT Ma Caawin Doontaa Ka Bixitaanka Bixinta Tafaariiqda?
Ka Fiiri Email-kan GIF-ga ah ee Xiisaha Leh ee laga helo Netflix